Home / समाचार / गगन थापा र प्रकाशमानसँग किन रुष्ट भए देउवा ? कारबाही गर्ने तयारीमा देउवा ? यस्तो छ भित्री तयारी
गगन थापा र प्रकाशमानसँग किन रुष्ट भए देउवा ? कारबाही गर्ने तयारीमा देउवा ? यस्तो छ भित्री तयारी 0
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा युवा नेता गगन कुमार थापासँग रुष्ट बनेका छन्। पछिल्लो समय निर्वाचनमा पार्टीले लज्जास्पद पराजय भोगेपछि गगनले एकतर्फी रुपमा हारको कारण पार्टी नेतृत्वमाथि थुपारेका थिए । उनले पार्टी सभापति देउवाले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने माँग गरेका थिए । त्यतिमात्रै नभएर उनले नेतृत्व हस्तक्षेप गरेर लिने भन्दै कडा अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए ।
गगनको उक्त अभिव्यक्तिसँगै मुलुकको राजनीतिमा तरंग पैदा भएको थियो । देउवा पक्षधरहरुले गगनको आरोप व्यक्तिगत भएको भन्दै उनले माँग्दैमा सभापति परिवर्तन नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री समेत रहेका युवा नेता महेन्द्र यादवले पनि गगनको उक्त शैली ठिक नभएको भन्दै आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘गगनको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जेपनि गर्ने गरेको तर पार्टीभित्र अनुशासन नमानेको पाईएको छ, यसबारेमा सभापति देउवाले कडा असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ।’
देउवाले गगनलाई आफ्नो ईमेजमात्रै जोगाएर बोल्ने गरेको आरोप लगाए । देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने,‘कांग्रेसको हित गर्नेगरि गगनले कहिल्यैपनि बोलेका छैनन, उनी आफूलाई जे फाईदा हुन्छ, त्यही गर्छन्।’
त्यस्तै अर्का नेता प्रकाशमान सिंहले पत्रकार ऋषि धमलाको हमलामा बोलेको कुराप्रति पनि असन्तुष्टि पोखेका छन्। दुवै नेताहरुलाई पार्टी अनुशासन कारबाही गर्नेबारे समेत देउवाले तयारी थालेको सूत्रले जनाएको छ ।
म अहिले इजरायलमा छु, श्रीमानलाई देखाउन भए पनि अर्को बिहे गर्न चाहन्छु ! अति मार्मिक व्यथा !